SEPE နှင့် ချိန်းဆိုပုံအဆင့်ဆင့် | Androidsis
SEPE နှင့် အဆင့်ဆင့် ရက်ချိန်းယူနည်း
ခဏအကြာ ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ချိန်းဆိုမှုများအတွက် SEPE ရုံးများကို ယခုပြန်ဖွင့်ပါပြီ။. ကပ်ရောဂါကြောင့် ပိုင်ရှင်မဲ့ မနေဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ရက်ချိန်းယူရန် ဝဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ညွှန်ပြချက်အချို့ကို ပေးထားသည်။
SEPE မှပေးသော အကြံပြုချက်များတွင် သင့်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်၊ အီလက်ထရွန်နစ် DNI သို့မဟုတ် စကားဝှက်ရှိပါက ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှ တိုက်ရိုက်လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟူသော အချက်ပါဝင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်တွင် လက်မှတ်၊ DNI-e သို့မဟုတ် စကားဝှက်မရှိပါက၊ အွန်လိုင်းကြိုတင်လျှောက်လွှာပုံစံကို ဖြည့်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ တတ်နိုင်သ၍ ရက်ချိန်းတောင်းပါ။ မန်နေဂျာက လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ချင်ရင်။
အဲဒါကြောင့် ဒီနေ့ ရှင်းပြမယ်။SEPE အတွက် ရက်ချိန်းကို အွန်လိုင်းက ဘယ်လို တောင်းဆိုနိုင်မလဲ၊ ဒါမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုအပ်ရင် သူတို့ရုံးတွေမှာ လူကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတယ်။ သင့်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ရက်စွဲနှင့် အချိန်နှင့် ချိန်းဆိုထားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ၎င်းကို ချရေးရန် အမြဲအကြံပြုလိုသည်ဟူသော အကြောင်းကြားချက်ကို သင်လက်ခံရရှိသင့်သည်ကို သတိရပါ။
1 အွန်လိုင်းအလုပ်လက်မဲ့များနှင့် ရက်ချိန်းယူရန် ကြိုးစားသည့်အခါ လိမ်လည်မှုများကို သတိပြုပါ။
3 SEPE အွန်လိုင်းတွင် ရက်ချိန်းယူရန် နောက်ဆုံးအဆင့်များ
3.1 ဖုန်းဖြင့် ရက်ချိန်းတောင်းပါ။
အွန်လိုင်းအလုပ်လက်မဲ့များနှင့် ရက်ချိန်းယူရန် ကြိုးစားသည့်အခါ လိမ်လည်မှုများကို သတိပြုပါ။
ပထမနေရာတွင်၊ သင်သည် တရားဝင် SEPE လင့်ခ်ကို အမြဲဝင်ရောက်သင့်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် တရားဝင်တစ်ခုမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှ အသုံးမပြုသင့်ပါ၊ သင်သည် Sepe.gob.es ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင် ဟိုက်ပါစာသားလွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် လုံခြုံရေးပရိုတိုကောတစ်ခု ပါရှိသည်။ ဤဝဘ်စာမျက်နှာအမျိုးအစားတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုဝဘ်စာမျက်နှာတွင် သင်သည် SEPE အတွက် ရက်ချိန်းယူရမည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် သင့်ထံတောင်းဆိုထားသည့် ကွက်လပ်များအားလုံးကို ဖြည့်စွက်ရမည်၊ အချို့မှာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သင်ယခုအချိန်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခြားတောင်းဆိုမှုများပေါ်မူတည်၍ မတူညီသောရွေးချယ်မှုများ ပေးဆောင်သည်။
SEPE တွင် ရက်ချိန်းတောင်းခြင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်လက်မှတ်မပါဘဲ၊ DNI-e၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ကို အသုံးပြု၍ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ရုံးတွင် cl@ve အသုံးပြုသူရှိခြင်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အလုပ်လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်၊ ရက်ချိန်းတစ်ခုတောင်းဆိုရန် သို့မဟုတ် သင့်ရှိပြီးသားရက်ချိန်းကို ပယ်ဖျက်ရန် ဤနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုလည်း သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရက်ချိန်းတောင်းဆိုမှုကို စတင်သောအခါ၊ ပထမဆုံး SEPE က မင်းကို ရိုက်ထည့်ခိုင်းရမယ့် အရာက မင်းမြို့ရဲ့ စာတိုက်ကုဒ်၊ ဒါကြောင့် တင်ပြီး ဆက်လုပ်သင့်တယ်။ ထို့နောက် သင်လုပ်လိုသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ရွေးချယ်ရမည့် ဝင်းဒိုးတစ်ခုကို သင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရုံးတွင် ရွေးချယ်စရာ ခြောက်ခုအထိ ရှိနေသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ သင်လိုအပ်သောတစ်ခုကို နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် သင့် ID ကိုထည့်ကာ Continue ကိုနှိပ်ပါ။
အခု ဘယ်ရုံးတွေရှိလဲ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ သင့်တည်နေရာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ။မင်းရဲ့မြို့နဲ့ အပြင်မှာ အများအပြားရှိနေတာကို မင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ သင်အလိုရှိသော ရုံးကိုရွေးချယ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ထပ်မံနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် သင်ရရှိနိုင်သည့် အနီးစပ်ဆုံးရက်စွဲကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်လိုချင်သော သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ရှေ့ဆက်ရန် ကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။
ယခု သင်မြင်ရသည့် ကွက်လပ်များအားလုံးတွင် အဖြူရောင်ဖြင့် ဖြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ အမည်၊ အမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပတ်၊ ရှေ့မျက်နှာစာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ အစရှိသည့် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပြီး မေးခွန်းများရှိပါက နောက်ဆုံးတစ်ခုသာ လိုအပ်ပါသည်။ မှတ်ချက်ဆိုတာဘာလဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတိပေးချက်ကိုလက်ခံပါ၊ လုံခြုံရေးအကွက်ကိုဖြည့်ပြီး အပြီးသတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အမြန်ဖြည့်သွင်းပါက ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် မိနစ်အနည်းငယ် ကြာနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
အောက်မှာ ချိန်းဆိုမှုကို မက်ဆေ့ချ်နှင့် ကုဒ်တစ်ခုဖြင့် တောင်းဆိုပြီးသည်နှင့် SEPE သည် သင့်အား အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ မက်ဆေ့ဂျ်သည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် နေ့၊ လ၊ နှစ်၊ ရုံးနှင့် နောက်ဆုံးတွင် SEPE စာမျက်နှာတွင် သင်ထည့်သွင်းရမည့် ကုဒ်ကို ပြသထားသည်။
ဤနေရာတွင် သင်သည် စကားဝှက်ကို အမြန်အသုံးပြုရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ ၎င်းမှာ သင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြားသူမဟုတ်ကြောင်း ပြသသည့် အတည်ပြုချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသော တရားဝင်မှုကာလတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် ဤအမြန်လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်၊ မဟုတ်ပါက စာမျက်နှာသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် အစမှ စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်လက်ခံရရှိသောကုဒ်ကိုဖြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ဆက်လုပ်ရန်ကိုနှိပ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အပြီးသတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ အရာအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန် ဝဘ်စီမံခန့်ခွဲရေးမှ ok ကိုလက်ခံရရှိရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပြီးသွားရင်တော့ ချိန်းထားတဲ့နေ့မှာ သွားနိုင်ဖို့ ပြေစာကို သိမ်းထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
SEPE အွန်လိုင်းတွင် ရက်ချိန်းယူရန် နောက်ဆုံးအဆင့်များ
စနစ်က သင့်တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် SEPE တွင် ချိန်းဆိုထားသည့် ပြေစာတစ်ခု သင့်ထံသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။နေ့နှင့်အချိန်တို့ ပါဝင်ပြီး၊ ချိန်းဆိုမှုကို တက်ရောက်သည့်အခါ အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည် ဤပြေစာအား အီးမေးလ်ဖြင့် လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်ဝင်စာပုံးကို သတိထားရပါမည်။
PSEPE ရုံးတွင် ချိန်းဆိုထားသည့်နေ့တွင် ၎င်းကိုပြသရန် ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။. လျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့တွင် သင့်အလှည့်ရောက်လာသောအခါတွင် သင်၏ရက်ချိန်းကို စာရွက်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည့် ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသဖြင့် ၎င်းတို့သည် သင်အမှန်တကယ်မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အတည်ပြုထားသော ချိန်းဆိုမှုကို ညွှန်ပြသည့် SMS တစ်စောင်အပြင် သင်ပြထားသည့် အဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ချိန်းဆိုမှုကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်နိုင်သည့် နေရာတစ်ခုကိုလည်း သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤမက်ဆေ့ချ်သည် SEPE ရုံးများတွင် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်သည့်အခါတိုင်း လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကူညီပေးပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ကို မဖျက်ရန် အကြံပြုချက်မှာ ရုံးဝန်ထမ်းမှ သင့်အား ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုပါက ၎င်းကို ပြသရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်တွင် SEPE သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတစ်ဆင့် အညီအမျှ လျင်မြန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းရှိသည်။အလိုအလျောက်ဝန်ဆောင်မှု (စက်ရုပ်) ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သင်တက်ရောက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤသည်မှာ နိုင်ငံတော်အများပြည်သူဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
SEPE တယ်လီဖုန်းသည် တစ်နေ့လျှင် 24 နာရီရရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အားလုံးအလိုအလျောက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ရက်ချိန်းတစ်ခုတောင်းဆိုရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သည် ၉၁၂ ၇၃ ၈၃ ၈၄ ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိထားသည်။
SEPE တွင် သင့်ချိန်းဆိုမှုကို တယ်လီဖုန်းဖြင့် တောင်းခံပြီးသည်နှင့် သင်တောင်းဆိုထားသည့် ချိန်းဆိုမှုကို အတည်ပြုချက်နှင့်အတူ စနစ်က သင့်ထံ SMS တစ်စောင် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ချိန်းဆိုချက်ကို လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဤပြေစာကိုလည်း သိမ်းဆည်းထားရန် မမေ့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » SEPE နှင့် အဆင့်ဆင့် ရက်ချိန်းယူနည်း
Minecraft တွင် ပန်းအိုးလုပ်နည်း